Inzwa ye-S10 yeminwe inokukhohliswa ngeprinta ye-3D | IPhone iindaba
El Samsung Galaxy S10 kukuphela kwesiphelo, sokuba iSebenzisa izixhobo ze-ultrasonic zeminwe phantsi kwesikrini, uhlobo lwenzwa olusebenzayo nokuba iminwe yethu imanzi, ukufuma kwindalo esingqongileyo okanye sisebenzisa umshicileli we-3D ukwenza ubumba lweminwe yethu njengoko kubonisiwe ngumsebenzisi kwi-Imgur.
Ngokwenyani ukusungulwa kwayo kwintengiso, inzwa yeminwe yeGPS S10 ivelise iingxaki ezahlukeneyo zokusebenza onyanzele inkampani ukuba ikhuphe uhlaziyo ukuze iphucule. Le nzwa yenziwe nguQualcomm kunye Kubonakala ngathi ayikhuselekanga njengokuba kufanelekile ekuqaleni.
Ndizamile ukukhohlisa i-Samsung Galaxy S10 yesikena somnwe ngeminwe ngokusebenzisa ushicilelo lwe-3d. Ndaphumelela.
Kwakhona, ayihambelani nabo bonke abakhuseli bekhusi, Enyanzela abasebenzisi ukuba bathenge abakhuseli abathile, amaxabiso abo angabalulekanga. I-Darkshark, umsebenzisi we-Imgur owayenakho ukugqitha kukhuseleko olunikezelwa yile sensor yeminwe, uqinisekisa ukuba ngobuchule obuncinci kunye nomshicileli we-3D, sinokweqa ukhuseleko olunikezelwa sisiphelo sendlu sakwaSamsung salo nyaka, ukongeza kwiGalaxy Note 10 eza kufika ngo-Agasti kwaye mhlawumbi inoluhlobo olufanayo lwenzwa.
I-darkshark ibango lokuba ifumene umfanekiso weminwe kwibhotile yewayini. Sebenzisa isoftware yokuhlela ye3D, yongeze ubunzulu bokuba imijelo yeminwe ifuna ukubonwa ngayo nayiphi na inzwa yeminwes. Emva kwexesha, wathumela ifayile yeminwe ukuba iprintwe ngomshicileli wentlaka, owamxabisa i $ 460.
Ujongene nokuwa okunokwenzeka, yeyiphi i-terminal ebambe ngcono: i-iPhone XS Max okanye i-Samsung Galaxy S10 + entsha?
Kuthathe imizuzu eli-13 ukuba umshicileli aprinte umakishi we-biometric ongeyonyani okwaziyo ukukhohlisa inzwa ye-ultrasonic phantsi kwesikrini se-S10. Ngexabiso lokuprinta iminwe ngomshicileli we-resin ukulungiselela le njongo, ngokucacileyo Kuphela yingcali ebandakanyekayo kolu hlobo lobusela onokulufumana
Nje ukuba iqinisekisiwe, injongo ka-Apple yokwenza sebenzisa inzwa yeminwe phantsi kwesikrini, ikhutshelwe ngaphandle ngokupheleleyo, kuba ngale ndlela ilula ukhuseleko olusinika yona sinokudlula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » Inzwa yeminwe ye-S10 inokukhohliswa ngomshicileli we-3D